Manakiana fa tsy manenjika • AoRaha
Manakiana fa tsy manenjika
Aza sakanana ireo sokajin’olona tsy mankasitraka loatra ny fomba hitantanana ny Barea amin’izao andro vitsivitsy mialoha ny handraisan’i Madagasikara anjara voalohany amin’ny CAN, any Ejipta izao. Fahita any ivelany, indrindra any amin’ireo efa voasokajy ho firenen-dehibe, ny fanaovana ny ekipam-pirenena ho entam-barotra.
Iharan’ny fanakianana mavaivay kosa ny fanosorana loko politika amin’ny baolina kitra, toy ny ankamaroan’ireo taranja hafa, matoa tsy azon’ny fanjakana iditridirana ny raharahan-tokantranon’ireo federasiona samihafa. Tsy mbola i Madagasikara mihitsy no hisora-tena ho isan’ny mpanjakan’ny baolina kitra maneran-tany, tahaka ny Brezilianina, Espanôla, Frantsay na ny Alemana. Sady tsy mbola sangany aty Afrika isika no efa tsy lohany aty amin’ny ranomasimbe Indianina intsony aza.
Toe-tsaina iray azo faritana ho fototry ny fanatanjahantena avo lenta ny fanetren-tena. Tsy politika ny fanatanjahantena ka hoe misy fahagagana raha mandany volabe toy ny amin’ny fampielezan-kevitra dia ho tafita amin’ny faran’izay ambony. Ho an’ireo mpanaraka ny baolina kitra eoropeanina dia mahita ny tsy fahombiazan’ireo klioba goavana izay tohanan’ny mpanam-bola arabo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Nahoana aza no totofana serasera be sy fanindrahindrana toy izao ny Barea? Tokony ho vita tamin’ny fankalazana ny
fahatafitana voalohany tamin’izao dingana famaranan’ny CAN any Ejipta izao, taorian’ny lalao tamin’i Guinée
Equatoriale teny Vontovorona ny fety rehetra.
Asa sy ezaka no takina taorian’iny, indrindra ho an’ireo mpilalao fa tsy hihevi-tena manoatra noho ny maherifo niady tamin’ny fahazoana ny Fahaleovantenan’i Madagasikara, ka tonga hatramin’ny fanomezana azy ireo ny zo rehetra amin’ny fitantanana ny vola rehetra ilaina amin’ny fanomanan-tena mialoha ny CAN. Manginy fotsiny ny “ady boaty” amin’ny fampivadiana ny anarana sy sary, na orinasa na antoko politika na mpitondra fanjakana, amin’ny anaran’ny Barean’i Madagasikara. Aleo ireo manan-kolazaina mba hamoaka ny fanahiany sao hahatsara zavatra sy hampahatsiaro saina ihany. Ady ambony kianja ny baolina kitra fa tsy “mazia mazia” any anaty vata fandatsaham-bato. Tsy maninona, aleo hialoha lalana ny mpanakiana, fa tsy halako bika tsy tiako tarehy
ny azy ireo fa fitiavana ny hanana ny tsara.
Fankatoavana didy hitsivolana Hivory tsy ara-potoana ireo Antenimiera
Famerenana fifidianana ben’ny tanana Miandry vokatra feno ny minisiteran’ny Atitany vao hamaritra tetiandro
Fanenjehana mpitondra ambony Maniry ny hisian’ny fanavaozana lalàna ny minisiteran’ny Fitsarana
Fanangonan-karena tsy ara-dalàna :: Mety hasiam-panitsiana ilay lalàna vao hivoaka ny hitsivolana